डा. केसीमाथिको दु’र्व्यवहार क्रु’रताको पराकाष्टा: गगन थापा « Postpati – News For All
असोज ६, काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले अनसनरत डा. गोविन्द केसीमाथि सरकारले गरेको दु’व्र्यवहार क्रू’रताको पराकाष्टा भएको बताएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमै अनसन बस्ने भनी जुम्लाबाट आएका डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज जान नदिई प्रहरीले ज’बर्ज’स्ती ट्रमा सेन्टर लगेको थिए । सोही घटनालाई लिएर नेता थापाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
उनल सत्याग्रहीलाई ईच्छा विपरीत छुन पनि नपाइने प्रचलन भए पनि अनशनरत डा. गोविन्द केसीमाथि सरकारले गरेको अ’पमान’जनक व्यवहार लोकतन्त्रमा अ’कल्पनीय र अक्ष’म्य रहेको बताएका छन्। उनले यस्तो प्रकारको व्यवहार क्रू’र ता’नशा’हले मात्रै गर्न सक्ने बताएका छन्।
उनले सरकारले सत्याग्रहीमाथि दु’व्र्यव’हार गरेर सरकारले आफ्नो पत’नको बाटो आफै खनेको आ’राेप समेत लगाएका छन्।
‘सत्याग्रहीलाई इच्छा विपरीत छुन पनि पाइँदैन । तर, अनशनरत डा. गोविन्द केसीमाथि सरकारले गरेको अप’मानजनक व्यवहार लोकतन्त्रमा अ’कल्पनीय र अक्ष’म्य छ । क्रू’र ता’नशाहले मात्र यस्तो नि’न्दनीय कृ’त्य गर्नसक्छ । सरकारले आफ्नो पत’नको बाटो आफैँ खनेको छ’, मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा नेता थापाले लेखेका छन्।
नेपालगन्जबाट काठमाडौं उत्रिने बित्तिकै प्रहरीद्वारा जबर्ज’स्ती राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा भर्ना गरिएका डा. गोविन्द केसी केही बेरमा डिस्चार्ज हुने भएका छन्।
डा. केसी अहिले साँझ सवा ६ बजे डिस्चार्ज हुने उनका सहयोगी प्रितम् सुवेदीले बताए ।
सत्याग्रहीमाथीको दु’र्व्य’वहार: क्रु’रताको पराकाष्टा !
सत्याग्रहीलाई इच्छा विपरित छुन पनि पाईदैन।तर अनशनरत डा.गोविन्द केसीमाथी सरकारले गरेको अ’पमा’नजनक व्यवहार लोकतन्त्रमा अकल्पनीय र अक्ष’म्य छ। क्रु’र तानाशा’हले मात्र यस्तो नि’न्दनीय कृ’त्य गर्नसक्छ।
६ आश्विन २०७७, मंगलवार को दिन प्रकाशित